सबैभन्दा सुन्दर पोखरी उत्तरी इटाली | एक ट्रेन सेव
घर > ट्रेन यात्रा इटाली > सबैभन्दा सुन्दर पोखरी उत्तरी इटाली
युरोप गरेको तेज रेल र सबै भन्दा केहि सुंदर मार्गहरू, रेल द्वारा यात्रा उत्तरी इटाली सबैभन्दा सुन्दर पोखरी आर्थिक छ, सहज, र प्रत्यक्ष, मा एक अन्तरदृष्टि भेटी स्थानीय जीवन, अक्सर संग ठूलो दृश्य पनि सम्झौता हालियो.
व्यावहारिक ज्ञानयुक्त को एक बिट संग मार्ग योजना र एक लचिलो तालिका, तपाईं एकदम सजिलै यात्रा बस रूपमा रूपमा प्रभावशाली बनाउन भनेर एक यात्रा सँगै टुक्रा गर्न सक्नुहुन्छ गन्तव्य.
उत्तरी इटाली गएर
सबैभन्दा देशहरूमा जस्तै, इटाली यसको आफ्नै उत्तरी इटालियनहरू संग उत्तर-दक्षिण भाग तिनीहरूले देशको आर्थिक मेरुदण्ड र औद्योगिक Powerhouse फारम भनेर घमण्ड छ.
Eyewear देखि फैशन खाना गर्न, इटाली गरेको उत्तरी क्षेत्रहरु लागि खाता 50% इटालियन अर्थव्यवस्था को ... देशको जनसंख्याको आधा भन्दा कम समावेश बावजुद!
को 8 क्षेत्रहरु छन्:
Trentino-अल्टोपराग्वे Adige / Sudtirol
दुई पहाड दायरा धन्यवाद, पाँच अलवण पोखरी, रलिंग हिल्स, र हलचल seaports, त्यहाँ उत्तर इटाली विविधता धेरै छ, पनि छोटो दूरीमा मा. तपाईं डोलोमाइट्समा स्किइ ofको तपाईंको हप्ता सुरू गर्न सक्नुहुन्छ, लेक नाइस मा बारेमा laze र अन्त यात्रा मा समुद्री मा feasting Cinque Terre!
जो रुचि ती फेसन र खाना त छैन निराश गरिनेछ. बोलोग्ना जस्तै रातो-छत वाला शहर प्यार को इटाली शहर मानिन्छ मासु भोग गर्दा पर्मा सरहद छन् prosciutto को दुनिया-वर्ग उत्पादकहरु र Parmesan.
त्यसपछि, को पाठ्यक्रम, त्यहाँ मिलन र दुई प्रसिद्ध शहरहरू छन् भेनिस इटाली को उत्तर मा पत्ता लगाउन! जब म भन्न मलाई विश्वास, हरेक आगन्तुक यहाँ प्रेम केहि पाउनुहुनेछ.
सबैभन्दा लचीलापन लागि, तपाईं गर्नुपर्छ एक कार भाडामा जब उत्तरी इटाली विभिन्न पोखरी हेर्न यात्रा. तपाईं सार्वजनिक भर गर्न चाहनुहुन्छ भने यातायात, it is definitely doable.
उत्तरी इटाली पोखरी – ताल नाइस
कुनै लेक नाइस उल्लेख र संभावना हो, आफ्नो आँखा माथि प्रकाश हुनेछ र "भन्न हुनेछ जर्ज Clooney!"
ताल नाइस, यस्तो पनि भनिन्छ Lario, उत्तरी इटालीमा तालहरूमध्ये तेस्रो ठूलो हो, लगभग अधिकतम गहिराई संग 410 मीटर (448 गज), पनि युरोप मा गहिरो ताल को छ.
छिटो तथ्य: तपाईंलाई थाँहा थियो, यसको विशेषता आकार, एक को reminiscent उल्टो वाई, पुरातन Adda नदीको erosive कार्य संग संयुक्त ग्लेसियर को पग्लिने परिणाम. यो को गठन गर्न नेतृत्व दुई दक्षिणी शाखा, बीचमा जो विश्वका लोकप्रिय छ Bellagio.
को को खुट्टा मा स्थित आल्प्स, ताल नाइस सबैभन्दा को एक प्रदान सुरम्य संसारमा censorious. तपाईं इटालियन पोखरी भ्रमण जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईं सेलिब्रिटी spotting बाहेक लेक नाइस मा गर्न धेरै कुराहरू सिक्न छक्क हुनेछ!
म एउटा डुङ्गामा छु!
ट्रेन द्वारा उत्तरी इटाली प्राप्त कुनै-brainer छ भन्ने तथ्यलाई बाहेक, we’ll admit hitchingaride onaboat is pretty cool too. Especially if you want to अनुभव यसको सबै भन्दा राम्रो मा विशेष ताल नाइस.
तपाईं कि एक दिन को लागि पोखरी नाइस भ्रमण वा अब रहन, एक डुङ्गा सवार हाम फाल्न, आराम र आफ्नो मनपर्ने शहर पुग्न: Bellagio, Varenna, रूपमा, वा को शायद एक ऐतिहासिक विला ताल को किनारा मा.
ताल Garda मा सबै भन्दा ठूलो पोखरी को छ उत्तरी इटाली र इटाली पाँच पोखरी को हिमनदीय ताल मा सबै भन्दा ठूलो, को द्वारा खुवाउनुभयो आल्प्स उत्तरी मा. भियना को उत्तर, ताल Garda सबैभन्दा परिवार छ – र पानी खेल-उन्मुख इटाली पोखरी को. यो इटालीको सबैभन्दा ठूलो ताल पनि हो, को पो उपत्यकाको उत्तरी किनारा गर्न ठाडो अल्पाइन तलहटी देखि पुगन.
दक्षिणी किनारमा तटों द्वारा लाइन र कम पहाड द्वारा समर्थित छ. उत्तरी हुँदा, पहाड र सरासर ठाडो भीर ताल fringe, विशेष गरी संग पश्चिमी किनारमा. यसको भू-भाग ताल एक दिन्छ थुप्रै प्रकारका लागि आकर्षण को खेल-मायालु पर्यटक. चढाई लागि पर्वतहरू गर्न जलयात्रा र विन्डसर्फिङ लागि स्थिर हावा बाट, rappelling, र पर्वतमा साइकल, ताल दृश्य सबै.
अझ राम्रो समाचार. ताल Garda स्थान यो एक वर्ष राउन्ड समशीतोष्ण जलवायु जैतून र कागति आफ्नो सामान्य दायरा उत्तर तरिकाले बढ्न जहाँ दिन्छ. केही दिउँसो जी लागि पूर्ण&टी! Add long sandy समुद्र तट र लेकसाइड promenades दृश्य सहर एक क्लच. तपाईं आफैलाई सही मिल्यो छुट्टी गन्तव्य!
पोर्टो लेक Garda Peschiera गाडिहरु गर्न
बोल्जानो Bozen लेक Garda Peschiera गाडिहरु गर्न
बोलोग्ना लेक Garda Peschiera गाडिहरु गर्न
भेनिस लेक Garda Peschiera गाडिहरु गर्न
त्यसैले तपाईं कसरी उत्तरी इटाली केही पोखरी हेर्न जाँदै गरिरहेको जस्तै महसुस गर्छन्? जबकि समय र पैसा बचत गर्न चाहनुहुन्छ ट्रेन द्वारा उत्तरी इटाली यात्रा? प्रयोग गरेर सबै आफ्नो रेल टिकट बुक एक ट्रेन सेव मिनेटमा, कुनै लुकेका शुल्क संग!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र बस सक्नुहुन्छ यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://embed.ly/code?URL = https://www.saveatrain.com/blog/beautiful-lakes-northern-italy/- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#lago #ताल #लेककोमो #LakeGarda #NorthItalyTravel northitaly NorthItalylakes